परिवारसहित गायिका कल्पना दाहालको धुमधाम विवाह, नाटकिय कि यथार्थ ? (भिडियो सहित) - Purbeli News
परिवारसहित गायिका कल्पना दाहालको धुमधाम विवाह, नाटकिय कि यथार्थ ? (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पौष ०३, २०७७ समय: १४:११:५१
इटहरी / दोहोरी गाएर सामाजिक संजालमा भाईरल भएकी गायिका कल्पना दाहालले लगनगाठो कसेकी छन् । यो खबर के सत्य नै हो त ? लोक दोहोरीलाई प्रोत्साहन गर्ने लोकप्रिय कार्यक्रम ईन्द्रेणीमा प्रखर वक्ता तथा पछिल्लो समय रिन्केबुङको रागो गीतको रिमेक भर्सनमा आवाज भरेर गायकको समेत परिचय बनाएका रमेश प्रसाईं संगै दोहोरी गाएर एकाएक चर्चामा आएकी कल्पनाको यो विवाह यथार्थ हो, तर एक म्युजिक भिडियोको लागि मात्र । उनलाई बेहुला बनेर साथ दिएका छन् पुरुषोत्तम पौडेलले ।